महिलाहरूको लागि सिफारिस गरिएका पुस्तकहरू: यी ती हुन् जुन हामी मन पराउँदछौं वर्तमान साहित्य
महिलाका लागि सिफारिस गरिएका पुस्तकहरू
पुस्तक दिनु सधैं राम्रो विचार हुँदैन। र यो त्यो हो, जब तपाइँ अर्को व्यक्तिलाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्न, जब तपाइँ एक विधा प्रदान गर्न आउँदछ तब तपाइँले गल्ती गर्न सक्नुहुन्छ जुन उनीहरूलाई मनपर्दैन। महिलाहरूको लागि सिफारिस गरिएका पुस्तकहरूको सन्दर्भमा, यसको मतलब यो होइन कि तिनीहरू महिला विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित छन्, न त ती महिलाहरूमा। तर ती उपन्यासहरू जुन एक महिलाले एक पुरुष भन्दा बढी कदर गर्दछ।
र त्यो हो, महिलाको लागि सिफारिस गरिएका पुस्तकहरू सबै स्वादका लागि हुन्: प्रेम, हास्य, कार्य, साहसिक कार्य, थ्रिलर ... हामी कसरी किताबको भण्डारहरूमा फेला पार्न सक्दछौं भनेर हेर्ने बारेमा राम्रो लिन्छौं, दुबै शारीरिक र अनलाइन? निश्चित रूपमा त्यहाँ केहि छन् जुन तपाइँको ध्यान आकर्षित गर्दछ।
1 महिलाहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो सिफारिश पुस्तकहरू
1.1 म राक्षस होइन
1.2 एक सेतो महिला बिना एकल महिला
1.3 हेसा। महापुरूष बीच एक प्रेम
1.4 Seams बीचको समय
1.5 महिलाका लागि सिफारिस गरिएका पुस्तकहरू: (अन) ज्ञात छ
1.6 दोस्रो लिंग
1.7 महिलाका लागि सिफारिस गरिएका पुस्तकहरू: श्रीमती डलोलो
1.8 प्रासंगिक आविष्कार
1.9 महिलाका लागि सिफारिस गरिएका पुस्तकहरू: द रिंग
1.10 खराब कर्म
1.11 महिलाका लागि सिफारिस गरिएका किताबहरू: समय जानका लागि
महिलाहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो सिफारिश पुस्तकहरू
पुस्तक लेख्न सजिलो छैन। कोही भन्छन् कि लेखक एक व्यक्तिको जन्म भएर जन्मेका हुन्छन्, र बृद्धि हुँदै जान्छन् जबसम्म उनले प्रतिष्ठाका ठूला कार्यहरू नगरे सम्म आफूलाई सिद्ध तुल्याउँछन्। सत्य यो हो कि यो सत्य हुन सक्छ वा हुन सक्दैन, तर साहित्यिक बजारमा, त्यहाँ लाखौं पुस्तकहरू छन् र लाखौंहरू एक वर्षमा प्रकाशित हुन्छन्, दुबै प्रकाशकहरू र, अब, लेखकहरू आफैं द्वारा। यसले यसलाई यति संतृप्त बनाउँछ कि त्यहाँ रहेका धेरैमध्ये राम्रो पुस्तकहरू भेट्टाउनु लगभग असम्भव छ।
तर हामी तपाईंलाई यसको साथ मद्दत गर्न सक्दछौं जुन हामी एक्ट्युलिडाड लिटरेटुराबाट सिफारिस गर्दछौं।
म राक्षस होइन
वसन्त उपन्यास पुरस्कार २०१ of को विजेता, म राक्षस होइनँ एक कथाको शीर्षक हो जसले पात्रहरूलाई सीमित पार्छ। यो किनमेल केन्द्रमा सानो बच्चाको बेपत्ता पार्ने बारेमा हो र त्यस स्थितिका कारण पात्रहरूको सम्पूर्ण जीवन कसरी परिवर्तन हुन्छ।
एउटा सानो अनुच्छेद, र यो हो कथानकले तपाईंलाई सोच्न बाध्य तुल्याउन सक्छ, विशेष गरी यदि तपाईं एक भिडियो गेम प्लेयर हो, एक चर्चित खेलमा, जसको सुरुवात यस प्रकारको सुरू हुन्छ (किनमेल केन्द्रमा हराइरहेको बच्चा)।
एक सेतो महिला बिना एकल महिला
के तिमी हाँस्न चाहन्छौ? त्यसोभए यो तपाईंको पुस्तक हो। यसमा तपाइँ ईसा पाई पाउनुहुनेछ, एक पत्रकारिता र दर्शन मा डिग्री संग एक केटी जो एक काम छ कि दिन को सबै भन्दा बढी लिन्छ र पनि कम तिर्नुहुन्छ। निश्चित गर्नुहोस्, तपाईंसँग पार्टनर फेला पार्न समय छैन, त्यसैले तपाईं डेटि apps अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ।
तर पक्कै पनि, नतिजा वास्तविकता भन्दा खराब हुन सक्छ।
हेसा। महापुरूष बीच एक प्रेम
एक सम्पादकीय पुस्तकबाट एक आत्म-प्रकाशितमा जाँदै (जुन धेरैलाई थाहा छैन तर जब तपाइँ यसलाई पढ्नुहुन्छ यसले तपाईंलाई चकित तुल्याउँछ)। तपाईं ग्रेनाडामा आधारित एक उपन्यास भेट्नुहुनेछ। विशेष रूपमा, Alhambra मा। र के यति खास छ? ठिक छ केउहाँ कथा निकट भविष्यमा राम्रोसँग प्रख्यात किंवदन्तीहरुसँग सम्बन्धित छ (र सबै भन्दा अज्ञात) ग्रेनाडा को सत्य आउँछ। सबै भन्दा राम्रो, ती वास्तविक किंवदन्तीहरू लेखक द्वारा आविष्कार गरिएको थिएन, तर उनले ती सबै पूरा हुन सक्छ कि यस्तो फिट गर्न व्यवस्थित छ।
र कथा? यसले हामीलाई एक कडा महिला चरित्रको साथ प्रस्तुत गर्दछ, जो इस्लामवादको लागि युद्धमा डुबेको छ। उनको साथमा, धेरै पुरुष र दुई परिणामहरू जुन तपाईं आशा गर्नुहुन्न एक पुरुष पात्र पात्र।
यो उपन्यास महिलाहरूको लागि सिफारिस गरिएको किताब हो जहाँ तपाईं षड्यन्त्र, जासूसहरू र खतराहरू पूर्ण एक आकर्षक कहानी पाउनुहुनेछ। ती मध्ये एक जुन तपाईं पृष्ठहरूबाट अलग गर्न सक्नुहुन्न।
नायक सीरा क्विरोगा हो। उनी पोशाक निर्माता छिन् र उनी भर्खरै भेटेको मान्छेसँग म्याड्रिडबाट टाang्गियरमा सर्छिन्। पक्कै पनि, त्यहाँ चीजहरू अपेक्षित भएजस्तो छैनन्, र उनले टिटुआनमा जाने निर्णय गरे जहाँ उनले आफ्नै सिलाई कार्यशाला फेला पारे। यद्यपि त्यहाँ अझ धेरै कुरा हामी तपाईंलाई भन्न सक्दैनौं।
महिलाका लागि सिफारिस गरिएका पुस्तकहरू: (अन) ज्ञात छ
यो उपन्यास हेसाको रूपमा परिचित छैन; तर हामी विश्वास गर्छौं कि यसलाई पनि एउटा मौका दिइनु पर्छ। यस अवस्थामा, lउनले कथामा दुईजना महिला प्रस्तुत गरे जसको सैद्धान्तिक रूपमा कुनै पनि कुरा समान देखिदैन। यद्यपि कहानी अगाडि बढ्दै जाँदा हामी अर्को दृष्टिकोण पनि पाउँछौं।
थप रूपमा, यो भविष्यमा अवस्थित छ, वर्ष २०2063। मा।
महिलाहरूको लागि सिफारिस गरिएका पुस्तकहरूमध्ये, तपाईं फेमिनिज्ममा सम्बन्धित एउटा पनि मिस गर्न सक्नुहुन्न। र विशेष गरी, यो एक, जुन हो यो आन्दोलनको अत्यावश्यक टुक्रा। वास्तवमा यो उपन्यास होइन, तर महिला हो जहाँ महिलाको व्यक्तित्वको चर्चा विश्वभर र वर्षौंदेखि गरिन्छ, र यो बाह्य, सामाजिक र ऐतिहासिक रूपमा साथै आन्तरिक दुवै रूपमा कसरी देखिन्छ।
महिलाका लागि सिफारिस गरिएका पुस्तकहरू: श्रीमती डलोलो
हामी तपाईंसँग किन यस पुस्तकको बारेमा कुरा गर्दैछौं? ठिक छ, किनभने मुख्य चरित्र आज नारीवादको प्रतीक मानिन्छ।
यहाँ तपाईं क्लारिस्सालाई भेट्नुहुनेछ, एउटी आइमाईले ज्यादै महत्वपूर्ण मानिससँग विवाह गरेका थिए र एउटी छोरी पनि। तर उसको जीवनशैली त्यस समयमा सामान्य जस्तो हुनुहुन्न, बरु ऊ आफ्नो दिन, दिनको दिन बोक्ने तरिकामा, आफ्नो विचारहरू, आदिमा बाहिर खडा हुन्छ।
यदि तपाइँ महिलाहरूका लागि सिफारिस गरिएका पुस्तकहरूका बीचमा के खोजिरहनु भएको छ भने छोटो कथाहरू हुन् भने हामी तपाईंलाई यो पुस्तक उदाहरणको रूपमा दिन सक्दछौं। यो एक हो कथाहरूको संकलन जहाँ तपाईंसँग विभिन्न थिमहरू छन्: प्रेम, ईर्ष्या, सौन्दर्य, सम्बन्धहरू ...
महिलाका लागि सिफारिस गरिएका पुस्तकहरू: द रिंग
एउटा साहसिक उपन्यास, जहाँ नायक क्रिस्टिना एक वकिल हुन् र उनको जन्मदिनमा दुईवटा औंठीहरू प्राप्त गर्दछन्: एउटा शेयर ब्रोकरबाट, अर्को अज्ञातबाट। अवश्य पनि, त्यो दोस्रो औंठी प्राप्त गरेर उत्पन्न गरिएको रहस्यले उसलाई अनुसन्धान गर्छ को हुन सक्छ एक पठाउन को लागी, एक अविश्वसनीय प्लॉट को साथ।
कर्मा जहिले पनि हामीले भनेको कुरा हुन्छ तर त्यो, जब यसले हामीलाई छुन्छ, हामी धेरै हास्यास्पद हुँदैनौं, विशेष गरी यदि यो नकरात्मक हो। यस पुस्तकमा तपाईंसँग एक मुख्य महिला, एक टेलिभिजन प्रस्तुतकर्ता, ठूलो सफलता संग हुनेछ, जो शौचालयमा मर्छ। र अवश्य पनि, मृत्यु पछि लेखकले यसलाई पुनर्जन्म दिन्छ, केवल कमिलामा र तपाइँलाई थाहा छ, जब सम्म तपाइँ रानी हुनुहुन्न, "न त चुचु न काटी।"
महिलाका लागि सिफारिस गरिएका किताबहरू: समय जानका लागि
यस उपन्यासले जो कोहीलाई पनि संवेदनशीलताको साथ माया गर्छ कि तपाईंले यसमा पाउनुहुनेछ। र यो यो हो कि नायक एलिस, उसले हात्तीहरूको स्याहार गर्न र अध्ययन गर्न आफ्नो सम्पूर्ण जीवन खर्च गर्दछ र अचानक हराउँछ। उनलाई के हुन्छ भनेर जान्दै, कसरी उसकी छोरी सामान्यबाट कोही बन्छे, र विशेष गरी मातृत्वको भावनाको फरक तरीका देखाउँदा, तपाईंले कुनै समयमै पुस्तक समाप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » महिलाका लागि सिफारिस गरिएका पुस्तकहरू
बेनिटो पेरेज गाल्डोस द्वारा पुस्तकहरू
जनवरी मद्दत महिनाको लागि poems कविताहरूको चयन